Shandisa Google makosi ane chekuita neEcommerce | ECommerce nhau
Panguva ino tinoda kutaura newe nezve iyo Activate Google makosi ane hukama nee-commerce.
1 Chii chinonzi Google Activate?
2 Ndingaite sei kuti ndiwane iyo Google Activate makosi?
3 Chii chinonzi kuvhiya?
4 Muenzaniso weKushandisa makosi: E-Commerce
4.1 Chekutanga module - Tsanangudzo yemagetsi kutengeserana
4.2 Yechipiri module - Mhando dzekutengesa zvemagetsi
4.3 Chechitatu module - Kugadziriswa uye kugoverwa
4.4 Module yechina - Masocial network anoshandiswa pakutengesa zvemagetsi
4.5 Chechishanu module - Mobile commerce
4.6 Wechitanhatu module - Dhijitari Kushambadzira
4.7 Wechinomwe module - Iyo Google yekutsvaga injini
4.8 Module yechisere - Dzimwe injini dzekutsvaga
5 Ko Google inomutsa sei makosi-kumeso makosi anoshanda?
Chii chinonzi Google Activate?
Icho chinongova chirongwa chinoitwa nekambani nechinangwa chekupa dzidziso kuvanhu vanoda basa. Kuburikidza nhevedzano yezvirongwa uye makosi asina mutengo, avo vanofarira vanogona kudzidza matekinoroji akasiyana, hunyanzvi, pamwe nekuwana zviwanikwa zvemadhijitari.
Kuti upe ruzivo rwese urwu, Google yakabatana nemayunivhesiti akasiyana muSpain uye muEurope yose. Iyi chikuva chakagadzirwa neGoogle chinobvumidza vanhu vanofarira kuwana mahara kudzidziswa nechitupa, pamwe nekuzivikanwa kwedhijitari. Kwete izvozvo chete, ese aripo makosi anogona kuitiswa online, kunyangwe hazvo sarudzo yemeso-ne-kumeso ichipiwa zvakare, pakati payo makosi eE-Commerce, makosi ekushambadzira edhijitari, pamwe nedzidzo dze data analytics dzinomira.
Ndingaite sei kuti ndiwane iyo Google Activate makosi?
Kazhinji kubva kune yako wega Google Activate chikuva iwe unogona kubata ese maitirwo anodikanwa kuti uwane akasiyana mapurogiramu ekudzidzisa. Kubva kune yepamutemo Google Activate peji iwe unokwanisa kuwana ruzivo rwese rwunodiwa kuti unyorese kune chero eedzidzo aripo.
Sezvambotaurwa pamusoro, aya makosi anogona kuwanikwa chero muchimiro chepamhepo makosi kana kumeso-kumeso makosi, ayo mune ino kesi anowanzo dzidziswa mumaguta akadai seMadrid, Seville, Barcelona, ​​Salamanca, Zaragoza, Valencia, Alicante , Granada, Murcia, pakati pevamwe. Uye zvakare, yega ye Makosi ekudzidzira aripo akapatsanurwa kuita akasiyana mamamojuru ane angangoita makumi mana maawa imwe neimwe.
Chii chinonzi kuvhiya?
Kana uchiwana iyo emahara makosi kubva kuGoogle ActivateChaizvoizvo zvinongodiwa kuwana Internet uye zvakare uine Google account. Ichi chinhu chakakosha kudiwa kuti ugone kusarudza uye kunyoresa kune akasiyana makosi ekudzidzisa.
Izvo zvakakosha kuti uzive kuti mazhinji emakosi aripo akapatsanurwa kuita ma module kuitira kuti vatori vechikamu vawane mukana wekuyera kufambira mberi kwavo. Uye zvakare, zvimwe zviitiko zvinopihwa uye zvinokwanisika kupasa bvunzo usati wawana iyo inotevera module, kunyangwe hazvo zvirizvo, zvakakosha kuti mudzidzi apase bvunzo dzese ne75% mhinduro dzakarurama.
Izvo zvinodiwawo zadzisa zvese zvemukati memamojimendi gore risati rapera, mukuwedzera pakuita bvunzo yekupedzisira yekosi yega yega kuitira kuti chitupa chepamutemo chiwanikwe.
Muenzaniso weKushandisa makosi: E-Commerce
Kune avo vanofarira zvemagetsi zvekutengeserana, kune emitambo kosi dzinopihwa papuratifomu uye izvo zvinonyanya kubatsira kuti unzwisise zvakadzama mashandiro eE-commerce, marongero ekutevera uye nemimwe misoro inoenderana. Semuenzaniso, iyo E-Commerce kosi parizvino inowanikwa iyo yakakamurwa kuita 8 ma module.
Chekutanga module - Tsanangudzo yemagetsi kutengeserana
Iyi module inotanga nesumo kune e-commerce, tsvagiridzo, pamwe neBenchmarketing yakanakisa maitiro. Nyaya yemaitiro eCANVAS, kugadzirwa kwechitoro chepamhepo, dhatabhesi, dziviriro yedata, pamwe nekushandiswa kwehunyanzvi hweLEAN, digitization yemabhizinesi aripo uye mapeji ewebhu anodzidzisa anobatwawo ipapo.
Yechipiri module - Mhando dzekutengesa zvemagetsi
Mune ino module, misoro senge B2B maringe neB2C, zvigadzirwa zvemadhijitari, multiplatform, mitengo, kukanganiswa, nzvimbo dzekutengesera dzinotaurwa, mukuwedzera pakubata nezvikwiriso zvemapuratifomu emumwe kushambadzira, kupatsanurwa kutenga kana kutenga, madhiri uye makuponi., Pamwe nevanoenzanisa.
Chechitatu module - Kugadziriswa uye kugoverwa
Mune ino module, vadzidzi vanodzidza nezve logistics muEcommerce, kudzoka, kutumirwa kune dzimwe nyika, kugoverwa kwezvigadzirwa zvemadhijitari, kugoverwa kwezvigadzirwa zvemuviri, pamwe nekugovera zvigadzirwa zvakasanganiswa. Ivo vanozoziva zvakare zvese zvine chekuita nemitemo inorambidzwa, mutero, zvemunharaunda zvinopihwa, pamwe nekukurumidza uye kugadzirisa gakava.
Module yechina - Masocial network anoshandiswa pakutengesa zvemagetsi
Mune ino kesi, iri module inotaura nezvemhando dzakasiyana dzemasocial network aripo, anosanganisira Facebook, Twitter, LinkedIn, uyezve zvekuita nechitoro pamasocial network, maonero network uye kushambadzira mumasocial network. Ivo vanozogona kuziva zvinorehwa nehutachiona, iwo masocial network emifananidzo pa Instagram, pamwe nekukanganisa kwekukwikwidza pamasocial network Foursquare, WAZE.
Chechishanu module - Mobile commerce
Iyi module inotaura nezve kuunganidzwa kwemabhizimusi mamodheru, mhando dzakasiyana dzekuita mari, zvemukati, zvekufambisa, kushandiswa panharembozha, kushambadzira pane nharembozha, zvinoshandiswa maringe neappapps, yakawedzera chokwadi, pamwe nemutengi mukuru.
Wechitanhatu module - Dhijitari Kushambadzira
Iyi kosi yeEcommerce paGoogle inomisikidza zvakare inosanganisira module umo iwe yaunogona kudzidza zvese nezve email kushambadzira, zvakabatana zvirongwa, kuratidza mabhana, Google AdSense, kutarazve makuki, kuronga midhiya, online vhidhiyo kushambadza, futi.
Wechinomwe module - Iyo Google yekutsvaga injini
Iyi module inonakidza kwazvo mukati mekosi sezvo ichitsanangura zvakadzama mashandiro anoita Google, maokisheni, SEM uye SEO, pamusoro pekutaura pamusoro pezvishandiso zveSEO zviripo, inototaura nezve iyo itsva Colibrí algorithm.
Module yechisere - Dzimwe injini dzekutsvaga
Iyi ndiyo module yekupedzisira yeEcommerce kosi muGoogle Activate uye mune zvese zvinowirirana nebasa rekutsvaga paTwitter, basa rekutsvaga paLinkedIn, pamwe nebasa rekutsvaga paFacebook rinotsanangurwa. Musoro weGoogle adwords, ASO, data hombe rinoshandiswa kuEcommerce, pamwe nekutsvaga kunoitwa kubva kunharembozha zvinotariswawo.
Ko Google inomutsa sei makosi-kumeso makosi anoshanda?
Hapana mubvunzo kuti kosi dzekudzidzisa dzinopihwa neGoogle activate Ivo ndeimwe nzira yakanakisa kune vese avo vari kutsvaga kujoina musika webasa. Iwo makosi, mukuwedzera pakuve akasununguka zvachose, anowanikwa mukutarisana-ne-kumeso mode uye neinternet mode.
Munyaya ye Makosi-kumeso makosi, Izvi zvinoumbwa nezvirongwa zviviri zvemahara zvekudzidzisa. Kudzidziswa kwemabhizimusi kunovavarira kuwana ruzivo rwakakosha kuitira kuti munhu agone kuita seanamuzvinabhizimusi. Inotarisa kune mushandisi, zvikwata uye mhedzisiro. Iyi kosi yekudzidzira mune zvemabhizimusi inotora maawa makumi maviri nemaviri.
Kune zvakare a digital kushambadzira kosi iyo inosanganisira chitupa chakabvumidzwa neInteractive Advertising Bureau. Mune ino kesi, iri kosi inogara maawa makumi mana uye umo vadzidzi vanoshanda sechikwata neane ruzivo ruzivo. Mune ino kosi vadzidzi vanogona kudzidza nezve SEO, SEM, web analytics, Ecommerce, pamwe nemasocial network.
Yakazara nzira kuchinyorwa: ECommerce nhau » eCommerce » ECommerce kudzidziswa » Shandisa Google makosi ane chekuita neEcommerce